ARKit inoenderera ichiratidza mikana yayo mikuru mune iyi mienzaniso | IPhone nhau
ARKit inoenderera ichiratidza mikana yayo mikuru mumienzaniso iyi
IOS inogona kunge yakanonoka kusvika kune vakawanda kuAugmented Reality, chimwe chinhu chinogona kupokana kupa yakaderera kugamuchirwa iyo ichiripo nevashandisi nevashandisi, asi izvo pasina mubvunzo ndezvekuti Apple ine iOS 11 iri kuzonyatsoshandisa nzira iyi "nyowani" yekushandisa zvinoshandiswa nemidziyo nekuda kweARKit.
Zvishandiso izvo Apple zvakapa vanogadzira kuti vatore mukana weanogona Kuwedzera Kwechokwadi pane iyo iPhone nePadad vari kupa michero yavo yekutanga pavasina kuziviswa kunyangwe mwedzi wapfuura, uye kunyangwe paine budiriro yepamberi, zvese zvinoratidza kuti chichava bhomba chairo sezvatinogona kuona mumavhidhiyo aya ezvimwe zvidiki zviripo zvirongwa.
Chinhu chakakosha semamirita muenzaniso wakanaka wekuti Kuwedzera Kwechokwadi kunogona sei kupfuura mitambo yemavhidhiyo, chinhu chekutanga chinouya mupfungwa kana tichitaura nezvehunyanzvi uhu hutsva. Yako iPhone nePadad inova chinhu chakakosha kuyera icho chaunogara uine iwe.
Zviripachena kuti hatigone kukanganwa nezvemitambo yemavhidhiyo, iyo pasina mubvunzo ichave bhomba reARKit. A classic martian anova chimwe chinhu chinoshamisira kana iwe uchikwanisa kushandisa yako pachako hofisi sedanho semumuenzaniso uyu.
Isu tanga tichitaura rimwe zuva kuti IKEA yaizovhura yayo Yakawedzera Reality app kuti iwe ugone kuona midziyo yayo nenhumbi mumba mako usati waenda kuchitoro kunotora. Mumuenzaniso uyu tinoona kuti mune chero square unogona kuisa ndege wobva waiona sekunge yaivepo, kunyange kupinda mukati mayo.
Kutyaira mitambo kunogona kutora zvakasiyana zvakasiyana neARKit, sezvakaratidzirwa mune uyu muenzaniso wakapusa watinopaka mota kubva kuvheranda reimba.
Zvakadii nezvekuva nehondo yemahara pane yako yekurara pasi? Strategic mitambo inogona kusiya akajairwa mabhodhi uye kutora yekugara tafura asi uchishandisa yako iPhone kana iPad, ichinyudza iwe mune ingangoita chaiyo chiito.
Iyi ingori mimwe mienzaniso yatinogona kuwana pane network yevagadziri vadiki kana kunyange vanogadzira vakazvimirira. Fungidzira izvo zvinogona kuoneka kana makambani makuru emitambo yemavhidhiyo anotanga kuratidza mabheti avo neAugmented Reality.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iOS » iOS 11 » ARKit inoenderera ichiratidza mikana yayo mikuru mumienzaniso iyi
Maitiro ekuronga kutumira SMS pa iPhone (tweak)
Apple inopemberera Kudada mumaguta akati wandei muUnited States